Burma Partnership » Appeal to the Myanmar Peoples (Charter 77-inspired Call for Grassroots Democracy)
Appeal to the Myanmar Peoples (Charter 77-inspired Call for Grassroots Democracy)
By Myanmar individuals • April 7, 2016
We the endorsers of this declaration are Myanmar individuals who want to see liberty, justice and human rights prevail in our multi-ethnic multi-faith Union of Myanmar. Today our country has begun to move along the path of democratization, peace and harmony.
However, our farmers throughout the country have been displaced from their land and are being put behind bars as they protest against land grabs. They are being forced to exist under conditions similar to the ones their fore-parents lived through under the British colonial rule during the Great Depression worldwide.
Likewise, the majority of our labourers work in hazardous conditions, with no living wage, workers’ rights or social security – living the conditions not dissimilar to those that triggered the great nationwide Labour Strikes of the colonial era in 1936.
The non-Burmese ethnic peoples or the “minorities” are not faring any better. Those in active war zones live daily lives devoid of personal and communal safety, often on the run to survive. Inter-ethnic wars of varying degrees of intensity rage on as the Tatmadaw (the armed forces) has trampled upon the country’s founding Panglong or Pin-lon principles of ethnic equality and self-determination.
Today the mistreatment and indictment of student activists who, in 2015 demanded education befittingademocracy, is more inhumane, repressive and violent than that the British colonial administration meted out to striking Rangoon University students in the Nationalist Student Protests of 1936.
Our country’s Buddhist clergy and the majority lay Buddhist public too are being subject to various measures of manipulation, control and abuse through the government-patronized Sangha (or Buddhist clergy) organizations. Meanwhile our religious minorities face legalized racist discrimination, threats of violence, denial of the genuine freedom of religion including the right to repair or build places of worship.
Dejected and outraged by the lack ofaprofessional future, our public servants with diverse technical expertise have long been denied autonomy, adequate salaries and opportunities for advancement, while the retired and in-service military officers are appointed to lord the former in fields about which these military men have little expertise.
Even our own rank and file members of the country’s powerful national armed forces live with little economic security and few social safety nets, including those who have been injured and disabled serving in the Generals’ wars against their own peoples.
Our business-men and -women operate inaclimate of uncertainty while bearing the weight of the country’s officially mismanaged and malfunctioning cut-throat economy.
Finally, our national community of creative minds, from literati and theatrical artists to musicians and other performing artists, have lost the vital freedom of expression and freedom to create, bound by restrictive laws, official regulations and unofficial means of control.
We call on all Myanmar peoples to join hands in the birth ofanew era filled with genuine freedoms and equality for all ethnic peoples and communities. We firmly and fervently believe that only We the People determine our own destiny. We are – and we must be – the principal drivers for change. And we must act in unison now. We urge everyone to hold hands and work towards human rights, freedoms and genuine transition toafederalist democracy for all.
U Thein Than Oo
2. Saw Hpoe Khwa
3. Mun Awng (Singer)
4. Reverend Zaw Win Aung (Vice-Chair, Myanmar Council of Churches)
5. Saw Kapi
6. U Tin Aye Kyu (Poet)
7. Daw Phyu Phyu Win (Writer)
8. U Nay Win, General Secretary, YMCA Mandalay
9. Myawaddi Sayadaw (Mandalay) U A Ri Ya Bi Wun Tha
10. U Pazin Pein (Meikhila)
11. Nyi Pu Lay (Writer)
12. Asia Light Sayadaw U Sein Di Ta
13. Sithu Aung Myint (Journalist)
14. U Khin Maung Myint (President, YMCA Mandalay)
15. Ko Tar (Chin Dwin)
16. U Kyaw Thu (Free Funeral Service Society)
17. Dr Kyaw Thu (Paung Ku)
18. Harry Myo Lin (Mandalay)
19. Ma Wai Wai Nu (Arakan Woman’s Network)
20. U Ye Lwin (Mizzima Waves/ Flowers’ Path)
21. Sai Ye Kyaw Zwa Myint
22. U Tun Lin Oo (Sa Bae Phyu)
23. Phyo Win Latt (National University of Singapore/ Myanmar Cultural Research Journal)
24. Daw Khin Ohnmar (Burma Partnership)
ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လိုလားသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီလျှောက်လှမ်းစ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရောင်ခြည်သန်းစ၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး လမ်းစပေါ်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ လယ်သိမ်းခံ၊ ယာသိမ်းခံ တောင်သူလယ်သမားတို့၏ ဘဝကား ၁၉၃၀ ဆရာစံလယ်သမား သူပုန်ခေတ်နှင့် ထူးမခြားနား။
တရားမဲ့မှုကိုခုခံရင်း ထောင်ချခံရရှာသော လယ်သမားနင်းပြားများ၏ ဘ၀။
၂။ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုမရှိ၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ခလစာ လုံလောက်မှုမရှိကြသော အလုပ်သမားတို့၏ အဖိနှိပ်ခံဘ၀ကား ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံကာလအတိုင်း မပြောင်းမလဲ။
၃။ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့် အာမခံပင်လုံစာချုပ်ကို ချိုးဖောက်ခံရပြီး စစ်၏ အနိဌာရုံကို နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရရှာသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏ ဘ၀။
၄။ ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ် တောင်းဆိုရင်း ဗိုလ်အောင်ကျော်ခေတ်ထက်ဆိုးရွား။ လူမဆန်စွာရိုက်နှက် အကြမ်းဖက်ခံကြရရှာသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ဘ၀။
၅။ အသုံးချခံ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်း၍ နှိပ်ကွပ်သည်ကို ခံစားနေရသော သံဃာများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူအများ၏ ဘ၀။ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် ချိုးဖောက်ခံရ၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားမှုဥပဒေများပြဌာန်းပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရ၊ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ရာ သာသနိက အဆောက်အဦ တည်ဆောက်ခွင့်၊ ပြင်ဆင်ခွင့်များကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံနေရသည့် ဘာသာပေါင်းစုံပြည်သူများ။
၆။ အနာဂတ်မဲ့၊ လက်ရှိဘ၀လူတန်းမစေ့၊ ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အသုံးချခွင့်မရ၊ မိုးကျရွှေကိုယ်များ၏ ပရမ်းပတာခြယ်လှယ်ခံ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ ဘ၀။
၇။ ပြည်တွင်းစစ်၏ သားကောင်၊ ခြေလက်အင်္ဂါ အသက်ခန္ဓာ စွန့်လွှတ် အသုံးချခံရင်း ထမင်းမ၀၊ ဘ၀မလုံခြုံသည့် အညတရ တပ်မတော်သား မိသားစုတို့၏ ဘ၀။
၈။ လက်သင့်ရာစားတော်ခေါ် စီးပွားရေးစနစ်ဆိုးအောက် ဒူးထောက် အလဲလဲ အပြိုပြိုဖြစ်နေရရှာသော၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးသမား လုပ်ငန်းရှင်များ၏ မရေရာသောဘ၀။
၉။ စာပေ၊ ဇာတ်သဘင်၊ ရုပ်ရှင် ဂီတနှင့် သုခုမအသိုက်အမြုံတစ်ခုလုံး လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခွင့်ဆုံးရှုံးကာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု ဥပဒေပုဒ်မအမျိုးမျိုး ထမ်းပိုးအတင်ခံနေရရှာသော အနုပညာရှင် အသိပညာရှင်များ၏ ဘ၀။
ထိုသို့သော ဘ၀မှလွတ်မြောက်သော အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မြန်မာပြည်သစ်သို့ ရောက်ရှိရန်မှာ ပြည်သူသည်သာ အရာရာ၊ ပြည်သူသည်သာ အခရာ အားလုံးလက်တွဲပါဝင်ကြပါစို့။
Tags: Freedom of Information, Freedom of Movement, Human Rights Declaration, Laws, Myanmar Individuals
UN Special Rapporteur’s Visit Highlight ongoing Human Rights Issues in Burma